रोचक – Sanchar Patrika
काठमाडौँ । पैसा कमाउनुमात्र ठुलो कुरा होइन । कमाए अनुसार बचाउन सकिएन भने पैसा कमाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । आज राशीअनुसार घरको कुन भागमा पैसा राख्दा सम्पन्नता र समृद्धी आउँछ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । मेष राशीः घरको पश्चिम दिशामा धन राख्नु उत्तम मानिन्छ । धन राखेको ठाउँमा फलामको औँठी राख्नुका साथै साँझको समयमा धनको लेनदेन गर्नु एकदमै राम्रो मानिन्छ । वृष राशीः घरको पूर्व दिशामा राख्नुपर्छ । धन राखेको ठाउँमा सुन वा पित्तलको केहि बस्नु राख्नुपर्छ । साँझको समयमा धनको लेनदेन नगर्नुस् । मिथुन राशीः घरको उत्तर दिशामा धन राख्नुहोस् । तामाको केहि बस्तुहरु धन भएको ठाउँमा राख्नुहोस् र मंगलबार धनको लेनदेन नगर्नुस् । कर्कट राशीः घरको पूर्व–दक्षिण दिशामा धन राख्नु राम्रो हुन्छ । धन राखेको ठाउँको चाँदीको केहि वस्तु राखिदिनुहोस् । धन राखेको ठाउँमा कुनैपनि कालो सामान नराख्नुहोस् । सिंह
काठमाडौं । भारत, झारखण्डको रांचीमा दुई युवतीहरुले बिहे गरेका छन् । यी दुबै युवतीहरु दिदी–बहिनी नाता पर्ने हुन् । बितेका पाँच बर्षदेखि उनीहरू दुवैले एक अर्कालाई माया गरेका थिए । पछिल्लो महिना ती दुवै भागेर मन्दिरमा बिहे गरेका हुन् । अब दुबै समस्याबाट जोगिन अर्को शहर गइरहेका छन् । यी दुई युवतीहरु राजधानी रांचीबाट १६० किलोमिटर टाढा कोडरमा जिल्लाको झुमरी तिलैयाका हुन् । एउटी केटी २४ बर्ष र अर्को केटी २० बर्षकी छिन् । पहिलो केटीले स्नातकसम्म पढेकी छिन्, जबकि दोस्रो केटी माध्यामीक तहसम्मको छ । विवाह पछि, ती दुबै अर्को शहरमा बस्न चाहन्छन्, ताकि तिनीहरू समस्याहरूबाट जोगिन चाहान्छन् । उनीहरु भन्छन् कि जीवनमा जति सुकै गाह्रो भए पनि उनीहरु सधैं एक साथ हुनेछन् । उनीहरु समलिंगी जोडीका रुपमा लाज मान्दैनन् । उनले भनिन् कि ती दुबैलाई राम्ररी जानकारी छ कि अब समलिंगी सम्बन्ध देशभित्र कानुनी रूपमा मान्
अवस्य पढ्नुहोला ,म सुतेको थिए , मेरी श्रीमतिले मेरो टाउको मालिस गरीरहेकी थिइन ,म बिस्तारै – बिस्तारै निदाए जागेपछी उनले निधारमा भिक्स लगाइदिइन मेरो आँखा खुल्नासाथ उनले सोधिन केही आराम मिल्यो कि नाइ मैले मिल्यो भनेर टाउको हल्लाए फेरि उनले सोधिन कि , खाना खानुहुन्छ मलाई भोक लागेको थियो मैले भने खान्छु ” उनले फटाफट रोटी , सब्जी , दाल ,अचार , सलाद तुरुन्तै मेरो सामनेमा पस्किइन र आधा पल्टी – पल्टी मेरो मुखमा गाँस हाल्दै खुवाइन , मैले चुपचाप खाना खाएर फेरि ढल्किए श्रीमतिले मलाई आफ्नै हातले खाना खुवाएर उनी खुशी महसुस गर्दै किचनको काममा गइन म चुपचाप सुतीरहे र सोच्न थाले कि पुरुष पनि कस्तो हुन्छ केहिदिन अघि मेरी श्रीमती बि’रामी पर्दा मैले केही पनि गरिन यहाँसम्म कि एक कल फोन गरेर पनि खबर सोधिन उनले पुरैदिन केही खाएकी थिइन ,तर मैले उनलाई ब्रेड पस्किएर आफैलाई गौरवान्वित महशुस गरीरहेको थिए | मैले
काठमाडौं । प्रेममा धोका एकदम सामान्यजस्तै भएको छ । यस्तै, गुरुजीलाई प्रेममा धोका दिइएको छ । प्रेमिका भएपछि नजिकैको गाउँका एक युवक, जो एक बर्षसम्म फोनमा कुरा गर्थे, रोमान्टिक जीवन भएको थियो । एक बर्ष देखि नाटक चलिरहेको थियो । हरेक दिन घण्टौं कुरा गर्थ्यो र सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम पनि खाने गर्थे । पर्दा जब खुल्यो, त्यहाँ खैलाबैला मच्चियो । सत्य कुराको खुलासा भएपछि हात हालाहालसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । विवाद यतिसम्म बढ्यो कि यो कुरा प्रहरीमा पुग्यो र दुबै पक्षबीच सम्झौता गरेपछि चुपचाप घर आएका हुन् । यो घटना भारत, उत्तर प्रदेशको अमरोहा जिल्लाको अजीमनगर प्रहरी चौकी क्षेत्रका दुई गाउँमा सम्बन्धित छ । त्यहाँका एक युवक वर्ष अघिदेखि बासिन्दा छिमेकी गाउँका एक निजी शिक्षकसँग युवतीको रूपमा कुरा गर्दै आएका थिए । महिनौंसम्म कुरा गरिसकेपछि गुरुजीले पनि आफ्नो मन दिए । बिस्तारै, दुबैमा प्र
जीवनमा प्राप्त हुने सुख दुखको पूर्वानुमान लगाउन हस्तरेखा निक्कै प्रभावकारी हुने हस्तरेखाविदहरु बताउँछन्।हाम्रो हत्केलामा अनेक प्रकारका रेखा हुन्छन् । सबै रेखाको आफ्नै आफ्नै अर्थ हुन्छ । उमेर देखि भाग्य सम्मका कुरा हातका रेखाले बताउने ज्योतिषशास्त्रको दावी छ । जीवन रेखा हत्केलामा सामान्यतः तीन रेखा हुन्छन्।जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा र हृदय रेखा । बुढी औंलाको फेँदमा रहेको शुक्र पर्वतलाई घेर्ने रेखालाई जीवन रेखा भनिन्छ । यो रेखा चोरी औंलाको तल रहेको गुरु पर्वतको आसपास हूँदै हत्केलाको अन्त्यमा हुने मणिबन्द तर्फ जान्छ । यदी तपाइँको जीवन रेखा टुटेको छ भने यसले जीवन भरी दुःख दिन सक्छ । अशुभ जीवन रेखा हत्केलामा हुने जीवन रेखा जस्तो छ जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ । यदि यो रेखा एकदम छोंटो छ र अन्य रेखाले काटिएको छ भने यसले जीवनमा दुःख मात्र प्राप्त हुने संकेत गर्छ । जीवन रेखा जति लामो भयो त्यति नै शुभ मा
यी ५ प्रकारका व्यक्तिलाई भुलेर पनि नबनाउनुहोस् साथी, देख्न चाहान्छन् हरेक पक्षमा दुखी !
मानिस भनेको एक सामाजिक प्राणी हो । ९ महिना आमाको पेटमा रही गर्भ बाट धर्तीमा पाइला टेके सँगै उ विभिन्न भूमिकामा परिभाषित हुन्छ । कसैको छोरा, छोरी, नाति नातिनी, भाइ बहिनी, आदि । त्यो व्यक्ति जब ठुलो हुँदै जान्छ, अनि रगत सँग कुनै साइनो नजोडिएकाहरू पनि उसको जिन्दगीमा जोडिन् आउँछ एक साथी बनेर। साथीको सम्बन्धलाई एकदम पवित्र र मनको नाताको रूपमा बुझ्ने चलन छ । केही साथी यती फलदायी हुन्छन् जुन साथीको सङ्गत र उसले देखाएको बाटोका कारण निकै व्यक्ति सफल भएका छन् ।उदाहरण यस्तो पनि पाइन्छ, कतिपय संगतकै कारण पतित भएर गएका छन् । त्यसैले जहिले पनि असल व्यक्तिको मात्रै संगत गर्नुपर्छ । यहाँ हामीले यस्ता पाँच प्रकारका व्यक्तिहरुको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ, जस सँगको संगत तपाइँलाई कहिल्यै फलदायी हुँदैन । १.सधैँ आफ्नै कुरा लाद्नेः साथी यस्तो हुनुपर्छ, जसले तपाइँलाई साथ देओस् । तपाइँको कुरा पनि सुनोस्, न कि
काठमाडौँ । सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने मानिसले भ्यास्लिन आफ्नो शरीरलाई नरम र चिल्लो बनाउनको लागी जाडोमा लगाउने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा तपाईको मनमा लाग्यो होला कि आखीर भ्यासलीन कसरी कपालमा लगाउन सकिन्छ त ? आज हामी तपाईलाई भ्यास्लिनको प्रयोगको बारेमा बताउने छौँ। जसलाई जानेर र यसको परिवर्तन देखेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** आजको दौडधुपको समयमा कसैको साथमा पनि त्यति समय हुँदैन जसले आफ्नो कपालमा र स्किनमा ध्यान दिन सक्दैनौँ । जसको कारणले हाम्रो कपाल सुख्खा,हाँगा पलाउने,ज्यादा झर्ने हुन्छ। आज हामी तपाईलाई बताउने छौ कि यो उपाय अपनाउनाले तपाईको यी समस्याहरु हराएर जानेछ। यसकारणले हुन्छ कपालमा समस्या कपालको समस्याबाट मुक्ति पाउनुभन्दा पहिले किन आउँछ त कपालमा समस्या भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक छ। सामान्य रुपमा कपालमा आउने समस्या केवल गलत खानपान, अनियमित लाइ
एजेन्सी । यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ । भिडियोमा एक वर्षका बालक खाना बनाइरहेको देख्न सकिन्छ । उनको नाम हो कोबी । उनी अमेरिकाको भर्जिनियाका बासिन्दा हुन् । उनी सोसल मिडियामा खाना बनाउने विभिन्न नयाँ तरिका शेयर गरिरहेका हुन्छन् । जसको भिडियो सोसल मिडियामा अत्याधिक मन पराइएको पनि छ । उनको कोबी ईट्स नामक एक इन्स्टाग्राम अकाउण्ट पनि रहेको छ । जसमा २५ लाख भन्दा धेरै फलोअर्स छन् । अकाउण्ट भने उनका आमा बुवाले म्यानेज गरेका छन् । उनको एक यूट्युब च्यानल पनि छ । जसमा लाखौँ सब्स्क्राइब रहेको छ । उनको यो खाना पकाउने कलालाई देखेर उनका फ्यानहरु अचम्मित परेका छन् । आफु खाँदै र पकाउँदै गर्ने उनको कुकिंग गनेए स्टाईलले उनका फ्यानहरुलाई मोहीत बनाएको छ । बच्चा उमेरमै उनी यस्ता प्रतिभाका छन् भने पछि ठूलो भएपछि झन कस्तो होलान् यो कुराको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनलाई यस
सुताइको पोजिसनबाट पनि थाहा पाउनुहोस् तपाईको पार्टनरले तपाईलाई कति माया गर्दछन् ?
काठमाडौँ । विवाहको सुरु-सुरुमा त नयाँ जोडीले एक अर्कालाई अंगालोमा बेरेर सुत्ने गर्दछन्। तर विवाहको केही वर्षपछि पनि तपाईको पार्टनर यसैगरी सुत्ने गर्दछन् भने त्यो त खुसीको कुरा हो । तर यस्तो छैन भने तपाईको सम्बन्धमा कुनै गडबढी अवश्य छ। रातमा तपाईको पार्टनरसँग सुत्ने तरिकाले पनि तपाईको प्रेम सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने काम गर्दछ। अनुसन्धानले पनि सुत्ने पोजिसनबाट आफ्नो प्रेम कस्तो छ भन्ने बारे थाहा पाउन सकिने देखाएको छ। आज हामी तपाईलाई पार्टनरको सुत्ने पोजिसनबाट कसरी प्रेम थाहा पाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिदैछौँ। यदी तपाईकी पत्नी तपाईको काँधमा शिर राखेर सुत्ने गर्दछिन् भने उनलाई तपाईको निकै चिन्ता लाग्ने गर्दछ। धेरै जसो पार्टनर यस पोजिसनमा सुत्न मन पराउछन्। यसरी सुत्ने पत्नीले आफ्नो पार्टनरलाई निकै माया गर्ने गर्दछन्। यदी सुत्ने समय तपाईको पार्टनर आफ्नो पिठ्यु तपाईतिर टाँसेर सुत्ने गर्द
पूर्खाले गर्दै आएका यी कामलाई नसोच्नुहोस् अन्धविश्वास, स्वास्थ्यका लागि छन् फाइदै फाइदा
काठमाडौँ । परम्परागत रुपमा हाम्रा पुर्खाले केही नियमको पालना गर्ने गर्दछन्। ती नियम कुनै अन्धविश्वास नभइ हाम्रो स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। अध्ययनले पनि यो कुरालाई स्वास्थ्यका दृष्टीले निकै उत्तम सावित गरेको छ। आज हामी तपाईलाई तिनै परम्परागत कार्यको स्वास्थ्यसँग के सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। सूर्योदयअघि उठ्ने सुत्ने र उठ्ने समय तालिका निर्धारण गर्नु स्वास्थ्यका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्यका लागि हामी कम्तीमा ७ घण्टा गहिरो निद्रामा हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि वेलुकी समयमै सुत्नु राम्रो हो। बिहान सूर्योदयअघि नै उठ्न आवश्यक छ। शास्त्रमा सूर्योदयअघिको समयलाई ब्रम्हा मूर्हत भनिन्छ, जतिबेला वायुमन्डलमा चल्ने हावा स्वास्थ्यकर मानिन्छ । यसलाई प्राणवायु पनि भनिन्छ। यो हावा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायिक मानिने अध्ययनले पनि पुष्टी गर्दै आएको छ